admin – Page2– XY GROUP OF COMPANIES
December 20, 2020 November 20, 2019 by admin
ျပပြဲသုိ့လာေရာက္ ဝယ္ယူ အားေပးၾကေသာ မိတ္ေဆြသဂၤဟ အေပါင္း ကုိ XY – Trading Company မွ အထူး ေက်းဇူး တင္ရိွပါတယ္။ ပြပွဲသို့လာရောက် ဝယ်ယူ အားပေးကြသော မိတ်ဆွေသင်္ဂဟ အပေါင်း ကို XY – Trading Company မှ အထူး ကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်။ ….
EVEREST ATF & CVT TRANSMISSION FLUID ATF-III FLUID ကို အဆင့်မြင့် ဓါတုပစ္စည်းများနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားလို့ သံချေးတက်ခြင်း၊ ပွန်းတီးပျက်စီးခြင်း၊ အမြုပ်ထခြင်းတို့မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ATF-III type fluids / DEXRON®-III (H), DEXRON®-III, DEXRON®-IIE, DEXRON®, MERCON®, Ford ESP-M2C138-CJ, Ford ESP-M2C166-H or Type A Suffix A, Allison C-3/C-4, or Caterpillar TO-2 fluids အရည်အသွေးအဆင့် လိုအပ်တဲ့ ပါဝါစတီယာရင် ယူနစ်များ၊ ဟိုက်ဒြောလစ်၊ နှင့် ထရန်စမစ်ရှင်း စနစ်များ မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ EVEREST ATF III Claims: … Read more
Status of rice and broken rice export from Myanmar from 1 Apr 2018 to 30 Sep 2018.
We exports Yellow Maize with assurance of good quality. Myanmar farmers, mainly in hilly regions grow yellow maize and the production is increasing year on year to meet the demand of both domestic and foreign markets. Please do not hesitate to contact us for the detail information of Myanmar Yellow Maize. +959500 6510 … Read more
August 19, 2020 September 21, 2018 by admin
ဆီလီကာ ဓာတ်မြေသြဇာ အသုံးပြု ခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့် အကျိုးရလဒ်များ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဓါတု ဓာတ်မြေသြဇာ များကြောင့် ပျက်စီးနေသော လယ်မြေ ၊ ယာမြေများ အား ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးခြင်း။ သီးနှံအထွက်နှုန်းများ တိုးလာခြင်းနှင့် ရရှိလာသော သီးနှံများအား ပိုမို အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ခြင်း။ အက်စစ် ဓါတ်များသော မြေအမျိုးအစားများအား အက်စစ်ဓါတ် အာနိသင် လျော့နည်းအောင် ဓါတ်ဖြိုခွဲပေးခြင်း။ သီးနှံပင်များ အားနည်းနေခြင်းနှင့် ခြောက်သွေ့ခြင်း မဖြစ်အောင် ကာကွယ် တားဆီးပေးခြင်း။ ပိုးသတ်ဆေးများ လိုအပ်သည်ထက် ပိုမို သုံးစွဲနေရခြင်းမှ လျှော ့ချပေးခြင်း။ ဆီလီကာ ဓာတ်မြေသြဇာတွင် ပါဝင်သော ဓါတ်များ ဆီလီကွန် ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SiO2) 25% ကယ်လ်ဆီယမ် အောက်ဆိုဒ် (CaO) 35% … Read more
August 19, 2020 September 12, 2018 by admin
ပုလဲ ဓါတ်မြေသြဇာ နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ် ၄၆ % အပြည့် အဝ ပါဝင်သော အီရန်နိုင်ငံထုတ် ပုလဲ ဓါတ်မြေသြဇာ အရည်အသွေး မှန်ကန် ပြီး ၊ အလေးချိန် (၅၀) ကီလိုဂရမ် ပြည့်ဝစွာပါဝင်ပါသည်။ အရောအနှော ကင်းစင် သောကြောင့် တောင်သူလယ်သမားများ စိတ်ချ ယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်မှာယူ နိုင်ပါသည်။ ၀၉ ၅၀၀ ၆၅၁၀ ။ ၀၁ ၆၈၃ ၁၈၇ ။ ၀၁ ၅၂၈ ၉၁၀ [Zawgyi] ပုလဲ ဓါတ္ေျမၾသဇာ နိုက္ထရိုဂ်င္ဓါတ္ ၄၆ % အျပည့္ အဝ ပါဝင္ေသာ အီရန္နိုင္ငံထုတ္ ပုလဲ ဓါတ္ေျမၾသဇာ အရည္အေသြး မွန္ကန္ … Read more
AdBlue EcoGreen 20 Litre
September 19, 2018 September 12, 2018 by admin
Ad Blue Eco Green 20 Litre
August 9, 2020 September 12, 2018 by admin
Myanmar Emata White Rice 5% Myanmar Emata White Rice 10% Myanmar Emata White Rice 15% Myanmar Emata White Rice 20% Myanmar Emata White Rice 25%
Myanmar Parboiled Rice we export are … 1. Parboiled Rice – Max. 5% broken 2. 100% Parboiled Broken Sorted 3. Parboiled Rejected Rice SPECIFICATIONS 1. Parboiled Rice – Max. 5% broken For more information, feel free to contact us at +959500 6510 or email tinaunglay@xy-trading.com .